Uluhlu lweeMveliso zoMthengisi Uluhlu lweeDoll zesondo
Ingcebiso ngemveliso Isishwankathelo Thenga oonodoli besini sokwenene
Wamkelekile kwiziko leNgcebiso ngeMveliso yoDoli ngeSondo kwivenkile ye-urdolls. Siqokelele iindidi ezahlukeneyo zoonodoli besini kunye ukulungiselela wena. Banokuba neseti efanayo. Kodwa nganye ineempawu zayo, nganye unodoli wokwenene wesini ineempawu zayo ezizodwa. Ukuba ungumntu onobunzima bokukhetha, mhlawumbi apha unokukunceda. Ndikucebisa ukuba ufumane zonke iimodeli ezifanelekileyo kunye neempawu kwivenkile ye-urdolls. Ezi modeli ziyahlolwa kwaye ziqinisekiswe zakufunyanwa kwindawo yokugcina izinto. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukukhetha ngononophelo unodoli wakho wothando. Oku akusoloko kulula, kwaye ndingakunika ukhetho olunzima apha.
Festival Lixabiso uhlobo Uninzi oluthengiweyo
I-Doll yoSini ikhulu ngokuBonakala kobuNtu
Nangona zikho ezinye izinto ezithandwayo ngaphandle kwesondo esicocekileyo, oonodoli bothando ngokwendalo banesini kunye ne-anus. Ukongeza, unolwimi emlonyeni wakhe kwaye ngamanye amaxesha unamazinyo. Ndiyayithanda indlela abaphambeneyo nabangenakoyiswa ngayo. Ndibe nethamsanqa lokubabona benxilile. Uthe. Joyina iklabhu yethu yabalandeli kwaye usinike ingqwalaselo engakumbi, kwaye uya kuba nelona xesha lilungileyo ...
Iidoli zesini ziya kuthatha indawo yabasetyhini bokwenyani
Kukho namabango okuba siza kufikelela kwinqanaba apho oonodoli besini beya kuthabatha indawo yabasetyhini bokwenyani, kuba oonodoli besini baye baba yinto yokwenyani kangangokuba abanakuphinda bahlukaniswe kubafazi bokwenyani ngembonakalo. Xa ubona inani elikhulu lokukhetha ezikhoyo, akukho ndawo yempazamo. Nokuba yintoni eyenza ukuba ijusi ihambe, uya kuyifumana apha. Suc ...
I-Doll yoSondo yeyona nto ifunwayo encinci
Rhoqo, xa sisiva amagama athi "ngexabiso eliphantsi" okanye "atshiphu" xa ujonga oonodoli besini, unokucinga ngokufumana oonodoli abatyumkileyo abangama-90s okanye oonodoli besini abancinci abaza kuwa xa beqala ukusetyenziswa. Umzekelo, ungayisebenzisa njengento enyanzelekileyo, kwaye unokubeka itreyi, isitshixo, okanye i-smartphone kuyo. Akusekho kuphelelwa, umboniso omncinci weyona nto ...
Unodoli wokwenene wesini uhlala ekulungele ukumangalisa abanye
Le gadget ilungile ekunikezeni umnini imvakalelo yokwenyani yokuhlangana, ngelixa ivumela oonodoli besini ukuba basabele ngendlela eyiyo kwisini. Uhlala ekulungele ukumangalisa abanye kwaye abonise imeko yakhe elungileyo ngalo lonke ixesha. Namhlanje, wayenxibe iilokhwe zangaphantsi zabalandeli bakhe kwaye wabanika umqhaphu. Nokuba ungaluphi uhlobo lomfazi oza kukuchukumisa, unga ...
Isondo Unodoli Impendulo eqinisekileyo evela kubaThengi abonelisekileyo
Kuxhomekeke kuguqulelo, inokuma kwaye ibe namandla aneleyo ezingalweni nasezandleni ukulungiselela izinto. Unokukhetha uhlaziyo ukuqinisekisa ukuba unodoli wakho wesini unokuma ngaphandle kokuwa. Ngodoli wanamhlanje wothando, ungakha ubudlelwane bokwenyani kwaye wonwabe iminyaka emininzi. Akukho nanye kwezi echaphazela umgangatho. Yonke imihla sifumana okuhle ...
Unodoli wokwenene wesini ukhetha uhlobo oluchanekileyo lwentombazana ayithandayo
Jonga nje kwii-wigs ezininzi esinazo zoDoli boLuthando. Intombazana ngqo kumaphupha akho idibana nodoli xa befika ekhaya. Unokukhetha uhlobo oluchanekileyo lwentombazana oyithandayo. Ngaba uluhlobo lomfana othanda amantombazana atyebileyo anesikhumba esimnyama? Mhlawumbi uluhlobo oluthandayo ulusu olunamabele amancinci amancinci. Ndiyathemba ukuba uyakonwabela oku kulandelayo kwaye ukhumbule ukuba ...
Unodoli wokwenene wesini
Unodoli wokwenene wesini usetyenziselwa ukwenza elona nqanaba liphezulu lovuyo ebantwini
Kungelo xesha apho itekhnoloji yale mihla yayisetyenziselwa ukwenza elona nqanaba liphezulu lokonwaba elakha lafunyanwa ngabantu. Ngapha koko, ndilicwangcisile lonke icandelo leengcebiso kule bhlog, eliza kukufundisa indlela yokucoca, ukufihla, ukunxiba, kunye neengcebiso nje ngokubanzi zendlela yokwenza uninzi loonodoli abadala. Kwaye ingaphezulu kwesiporho esixabisa ...
Umlingane wakho wokwabelana ngesondo okwenyani uyanelisa kwiFantasy yakho
Unokubeka, wenze kwaye uyile idoli yakho yokwabelana ngesondo ngokokhetho lwakho. Akasoze akuphikise okanye aveze umnqweno ongunaphakade njengomfazi wokwenyani. Uya kuqala ukulahlekelwa bubuthongo de ufumane enye! Sinikezela ngeentlobo ezahlukeneyo zoonodoli besini be-TPE ukufumana iqabane lakho elifanelekileyo kunye nokwanelisa iminqweno yakho yesini. Sineendlela ezahlukeneyo kunye namaxabiso okutshatisa ...
Iidola zesini zokwenene
Yonwabela ezona zinto zimnandi ngeDoll yokwenene yokwabelana ngesondo
Iyadika kwaye ayinamsebenzi. Uyakuthanda ukonwabela ezona zinto zimnandi nabalandeli kwaye abaxelele ukuba uziva njani. Akukho mntu unokucinga ukuba babelana ngesondo nabantu ngelixa bethatha enye yeedoli. Ngethamsanqa, ukusebenzisa esi sixhobo yinto yexesha elidlulileyo. Ndiza kuzama konke okusemandleni ukunceda, ke nceda ukhululeke ukundibuza ukuba ndicinga ntoni ngaphambi kokuthenga unodoli. Nje ukuba ndifumane uncedo, ngaba ...
Uthando lwakho loDoli lunokufezekisa intshukumo yokwenyani
Unodoli wokwenene Ewe, unokumisela ukubonakala kodoli wesini ngokweminqweno yakho kunye nemibono yakho. Idoli sele yenziwe nge-silicone. Ezinye iinkampani ziye zafumanisa ukuba i-TPE yinto efanelekileyo. Ezi zi-elastomers ze-thermoplastic, ke uthando lwakho unodoli unokufezekisa intshukumo yokwenyani. Abantu abaninzi babonile kwaye bacinga ngemibono yesondo nokuba ...
Oonodoli beRobot baFana ngokungaFaniyo nakubantu bokwenyani
Uhlala ebharini, udanise kwaye uhlala esempilweni kwimithombo yeendaba zentlalo. Akakhangeleki ngathi uyatshata, kodwa loo nto ayimnqandi ekufumaneni esona sini sinyani. Bahlala benemingxunya emibini, kwaye mhlawumbi abathathu ukuba banethamsanqa. Aba nodoli beerobhothi zesini abafani ncam nabantu bokwenyani. Yonke into imalunga nonodoli besini ababalaseleyo kwicandelo ngalinye. Ngakumbi ...
Nika amandla iiDolls zoSondo ukuze uthathe iiPosi ezahlukeneyo
Unokukhetha uhlobo oluthandayo lonodoli wesini kwikhathalogu ebanzi. Unodoli wesini ekuqaleni wayevela eJapan kwaye wayilwa ngamaShishini aseMpuma eJapan ekupheleni kwenkulungwane ephelileyo. Olo doli wothando ufana nobomi, ukhohlise ukuza kuthi ga ngoku! Amadoda khange aluqaphele ukwanda koonodoli be-surreal. Yonke imihla baba ngakumbi nangakumbi. Oonodoli besini baba ...
Ukuhanjiswa kweMithombo yeendaba kuMboniso kwiiDolls zoSondo kuye kwanda ngokubonakalayo
Xa uqala ukwazisa unodoli wothando kubahlobo bakho, abanokungaqapheli kwangoko ukuba "ngunodoli wenene". Uthanda ukubonisa amaqhina akhe amakhulu kunye neempundu ezityebileyo. Ukwenza intshukumo engcangcazelayo eyenza ukuba abantu bangathintelwa bubuhle bayo bonke kunye nomtsalane ongaqhelekanga. Kule minyaka ilishumi idlulileyo, ukuhanjiswa kweendaba ngoonodoli ngesondo ...
Xelela Uthando Lonodoli Ngexhala Lakho Neengxaki
Oku kuqinisekisa ukuba ufumana amaxabiso asezantsi kunye nenkonzo yabathengi efanelekileyo. Silawula ixabiso, kwaye umntu uya kuhlala ekulungele kwaye ekulungele ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba unayo. Ewe, oonodoli besini nabo banobunzima babo, ke unokukholwa ngokwenene ukuba ukunye nendoda yokwenyani. Xa uxelela uNodoli wothando malunga neenkxalabo zakho kunye neengxaki, iya kumamela umonde ...
Unokwenza Uthando loBomi beDolls zesini lube luyinyani
Oonodoli besini abahle kakhulu (oyena doli wam endimthandayo uthengisa malunga ne- $ 2,000). Ngamanye amaxesha kuye kufuneke ndilalanise kwaye ndifumane into kuyo kuhlahlo-lwabiwo mali oluncinci, kwaye ndiyazi ukuba uninzi lwenu luyafana. Oonodoli bokwenyani banobunzima babo, obuqinisekisa ukuba unokwenza ubomi bothando boonopopi bezesondo bube yinyani. Unodoli wokwenene uziva ethambile kwaye eshushu kwaye ...
Unodoli wokwabelana ngesondo okwenyani uya kukungcamla kwaye akuthuthuzele
Iidoli zesondo ziya kulungiswa kwiinkcukacha zokugqibela ukuze uphinde uphinde ube ngumfazi wamaphupha akho. Awuyi kufumana unodoli weerobhothi wesini kwivenkile ethengisa iincwadi yabantu abadala. Ngale ndlela, ingaphezulu kokuphulula amaphambili. Unokukhetha unodoli wothando kwingqokelela yethu oya kukugona kwaye akuthuthuzele xa ulusizi. Ndiyindoda nje eqhelekileyo, ndiyayithanda into yokwabelana ngesondo ...
Ukuqonda okungakumbi koluntu ngoonodoli bezesondo kuya kutshintsha
Ilungu lobudoda lobudoda liya kulungelelaniswa neminqweno yakho, kwaye ekugqibeleni unokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho ngaphandle kokuthintelwa. Kuba kuyo yonke imiba enxulumene nombala, ubude, ubungakanani kunye neempahla zamehlo neenwele, oonodoli abathandayo baya kudibana namaphupha amaphupha akho kwabasetyhini. Ukonyusa ubunyani besini kuya kunceda ukutshintsha indlela abantu abacinga ngayo: Isini esinyanisekileyo ...
Ukuqhubela phambili koPhuculo kuLuntu lwaBanini beDollar
Umthombo wolonwabo uvela kukuxabisa abanye, ke ukonwaba kwakhe kuvela kuthando lwethu nokumlandela. Ukufuna uthando kunye nokwabelana ngesondo lolona lonwabo lunyulu. Oku, kuya kutsala umdla wabaphulaphuli ababanzi, abanokuvumela ukukhula okungaphaya kuluntu olungumnini wonodoli. Jonga ngeenxa zonke kwaye ubone oko kufuneka sikunike. Jonga nganye ...
Unodoli Wokwabelana Ngesondo Ngokwenene Ukunika Ukoneliseka okwenyani kunye noVuyo
Ngothando loonodoli, unokuwola kwaye wonwabe kakhulu. Kuxhomekeka kwiimfuno, unokuseta ii-avatat ezahlukeneyo zothando loDoli ukuze wonwabe ngakumbi kubomi bemihla ngemihla. Le torso yesondo yedoli iyathengiswa ngoku, ke lixesha elifanelekileyo lokuba uyithathe. Yinyani engakholelekiyo enokuhlala ikunika ulwaneliseko lokwenene kunye novuyo. Endaweni yoko, baya kumonela y ...
Inkonzo ezinikezelweyo kwiDoll yokwenene yokwabelana ngesondo yeyesibini kuye
Siza kuqhubeka nokufumana amajelo eendaba rhoqo nangakumbi. Siza kuyenza yonke inkqubo yoku-odola ngokulula kangangoko kunokwenzeka. Eyona nto ibalulekileyo esiyikhathaleleyo kukoneliseka kwakho. Oku kulungile kakhulu kumzi mveliso, njengoko kususwa ibala elijikeleze oonodoli besini kunye nokwanda kolwamkelo loluntu ngobunini bodoli besondo kubalulekile. Siya ...
Idoli yesondo ngaphandle kokuba neXabiso eliPhezulu lokuThenga
Obu bubomi obuqhelekileyo bemihla ngemihla obahlala noDoli woLuthando. Ukuba ukhetha enye yezi zidoli zesondo ngokweemvakalelo, isizungu kungekudala siya kuba ligama lakho langaphandle. Yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu kunye ne-silicone yodidi lwezonyango, unokuqiniseka ukuba lolona hlobo luhle kakhulu kwisisu somdoli wesini. Ngodoli wesini onjalo, uya kuba nolwalamano lokwenyani kwaye uya kuba ...
Ukuphila ngeDoll ngesondo kubandakanya okungaphezulu kwesondo
Yonke intlanganiso sisiqalo esitsha. Ndiyathemba ukuba ubona okusemandleni am ngalo lonke ixesha. Njengoko ishishini lonodoli lokwabelana ngesondo liya lisamkeleka ngakumbi, kuyathenjwa ukuba oonodoli bezesondo baya kuthathwa ngokubanzi njengeyona ndlela ikhuselekileyo yokuphuma kwiminqweno yesondo kwaye banike amandla okubonelela ngokonwaba ngokwesondo kubantu abakhubazekileyo. Unokuqiniseka ukuba yonke imibuzo wena njengo ...
Ngaba unokubamba iintlanganiso nonodoli wokwenene kangangeeyure ezininzi
Ungayisebenzisa le torso ekusetyenzisweni komva, kwilungu lobufazi nangomlomo. Le torso ilungile kwabo banomthamo wokugcina kunye nohlahlo-lwabiwo mali, njengoko usenokufumana zonke izibonelelo zedoli yesondo ngaphandle kokuhlawula ixabiso eliphezulu okanye ukuyigcina kwiindawo ezininzi. Ukuba ungumfoti ongahlawulwayo, unokuba neentlanganiso nonodoli wokwenene iiyure ezininzi. Umfazi wokwenene unoku ...
Uthando lwakho lweDoll lukulungele
Ngapha koko, oonodoli bezesondo babonakalisiwe ukuba banexinzelelo kunye nokuqonda ngcono izibonelelo zabo zeemvakalelo. Ukuba uneemfuno ezizodwa okanye iimfuno, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi. Siza kuqinisekisa ukuba ufumana unodoli wesini obukade umfuna. Akukho mntu usebenza nzima ukwanelisa abathengi babo kunathi. Unodoli wakho wothando uhlala ekulungele kwaye uya ...
I-Doll Doll ngokuchanekileyo Khetha phakathi kweentlobo ezahlukeneyo
Ukufika kwentwasahlobo kusivumela ukuba sihambe kunye engceni, siphefumle umoya omtsha, kwaye sileqe amabhabhathane amahle. Ngokukhawuleza iinyawo zam zatyibilika ndaza ndawela ezandleni zakho. Nangona kunjalo, abanye abantu basebenzisa okungaphezulu nje kwentsomi. Oonodoli besini abancinci ungazisebenzisa njengamaqabane kwaye ubavumele baphonononge ngakumbi. Ibala elijikeleze oonodoli bothando alikho ...
I-Doll yesini sowasetyhini
Unodoli wokwabelana ngesondo wokwenene uza eBomini
Iya kuba yimpazamo enkulu ukuphoswa lithuba lokuchitha eyona minqweno inkulu yesini ebomini. Abanye babathengi bethu bade basixelela ukuba Amehlo oDoli wothando aphuhlise obabo ubomi bokwenyani. Le bhedi yesilicone kunye nelungu lobufazi zifana nobomi ngangokunokwenzeka, njengabafazi bokwenyani, ngeenkcukacha ezimangalisayo. Lo nodoli wesini ungabizi kangako kulula ukuwufihla kwaye kulula ukuwucoca, ...
Iindlela Zokufumana Unodoli Wokwabelana Ngesondo Ngokwenene Uya esiba Ngakumbi nangakumbi
Ngequbuliso ndicinge kutshanje ukuba ndifuna ukuba ngumfazi owabelana ngobomi obumnandi nawe, obuya kundityebisa kwaye ubenze baphambane ngakumbi. Andazi ukuba ucinga ntoni, kodwa ndingavuya. Alithandabuzeki elokuba ikamva loonopopi bezesondo liqaqambile, ke lixesha elinomdla kushishino. Indibaniselwano yokwanda kokuvezwa kwemithombo yeendaba, itekhnoloji ...
Amadoda aDlala ngeDoll Toys aQinisekile ngakumbi kwaye aBantu
Ndiyazi ukuba ndikhe ndadibana nemeko efanayo, ke gcinani engqondweni xa nithenga oonodoli besini. Unodoli wesini uyayonwabisa indoda kwaye ithathe ingqalelo yongcinga wayo, kwaye ukuba bhetyebhetye kwayo kuyamvumela ukuba abambe izikhundla ezahlukeneyo ezithandwa ngamadoda amaninzi. Le yindlela yokuphoswa luvuyo lwesini, kodwa ngaphandle kwezinye iingxaki ezinokuziswa kukulalana kunye nokusondelelana. Umvelisi omtsha ...
Ukuqhagamshelwa koDoli weSondo
Kunzima Ukugcina Unxibelelwano loDoli weSondo okwexeshana
Ukuba ufumana unodoli wesini, uya kuziva wonelisekile ngokupheleleyo ngokwesondo. Oku kunokubangela ukuba uyeke ukulandela umfazi wokwenyani kwaye uhlale nodoli wakho we-silicone. Ke ngoko, ekuhambeni kwexesha, oonodoli abicah batyala imali yokwenene kuba bafuna ulondolozo oluncinci kwaye bayanyamezela. Kumadoda ahamba rhoqo, kunzima ukuthandana nabafazi. Umgama omde ...
Kuba oonodoli bezesondo baneziphumo eziqinisekileyo kunye nolonwabo
Kulabo bafuna unodoli we-silicone osengqiqweni nonokwenyani, ixabiso liya kuba ngamawaka amawaka eeruro. Ukongeza, amadoda amaninzi ayayithanda imvakalelo yoonodoli besini, kwaye ngenxa yokuba ulusu kunye nokuvuleka kwabo kujongeka njengabafazi bokwenyani, banokwanelisa umnqweno woonodoli besini. Oku kunokuba yinto elungileyo okanye engalunganga, kuba iqabane lokwenyani lomfazi ngokuqinisekileyo liya kuba ne-advanta ...
Isidlo sesini esiphakamileyo
Ubufazi bokuPhela kwesiphelo soDoli oPhezulu oPhezulu uziva unenyani
Nangona kunjalo, ikwakhona iimodeli ezinokufikeleleka, kubandakanya oonodoli bomzimba okanye oonodoli behip, zombini ezixabisa malunga nekhulu leerandi. Kungenxa yoko le nto kukho unodoli wesini, njengoko ihlala iyindlela yokuphelisa ezi ngxaki ngendlela esempilweni. Ayinamsebenzi ukuba awenzakalisi mntu. Ukwabelana ngesondo nosana-kunjani? Iyamangalisa. akho ndlela yimbi. U ...
Iidoli zabo zesini
Ngokuchanekileyo Abahambi ngoomatiloshe abangamaDatshi bathengise oonodoli babo besini eJapan
Ixabiso loonopopi abicah liphezulu kakhulu. Isifuba sonodoli we-TPE siya kugxadazela kwaye sijike, esinokuba sisigqibo kumadoda amaninzi. Ukongeza, amadoda amaninzi afuna umfazi oguqukayo, kwaye ngamanye amaxesha umfazi oqhelekileyo akenzi into efunwa yindoda. Njengoko sele usazi, oonodoli banakho ukubonelela ngobuqabane. Kwaye, emva kokuqonda ixabiso le-t ...
Iinguqu zoDoli besini
Ndicinga ukuba uNodoli weSini utshintsha indlela oqonda ngayo ngesondo
Abadumileyo kwi-Intanethi bahlala bezenza iingcali ngendlela yokuphila abaphakamisa iindlela ezithile zokuphila okanye indlela yokuziphatha. Ndicinga ukuba uCara uza kutshintsha ukuqonda kwakho ngesondo. Ayisiyibaxi lento, krwaqu nje kwisiza kuya kukungqinela. Khawufane ucinge ukuba unodoli wesini kwixa elidlulileyo wayebukeka njani. Zingoonodoli abadubulayo abenziwe ngeplastiki. Emva kokuseka le ngqokelela ...
Iminyaka embalwa elandelayo
Uza kutshintshwa njani nguShishino lweDex Doll kule minyaka imbalwa izayo
Olu hlobo lweetangile lwandenza ukuba ndiqokelele inani elikhulu loonodoli besini (ngokusisiseko igumbi lonke lendlu yam), kwaye nje ukuba ndiqalise, yayilikhoboka. Oonopopi bothando banamhlanje abasasebenzi ngoku. Le yidoli exelisa umfazi wokwenene ngokweenkcukacha zonke. Lo nodoli wesini awunanto yakwenza noonodoli berabha, afana neebhaluni t ...
Umntu wokwenene woBomi
Baziva Benoonodoli Besini Njengomntu woBomi boBomi
Xa kuthelekiswa nokuntsonkotha koonodoli besini banamhlanje, oonodoli besini abavela kumashumi eminyaka eyadlulayo ngaphandle kwamathandabuzo- kodwa ngaba oku kuyasebenza nakwiidoli zesini eziza kubakho kwintengiso kwiminyaka engama-20 kamva? Ngaba awucingi ukuba usulelo lwakhe lomelele? Ukuba ekugqibeleni uyayithanda, iya kunceda kakhulu. Ucinga ntoni ngabantu abadumileyo abakwi-Intanethi? Aba nodoli bathandekayo bayinyani kangangokuba abantu abaninzi ...
Idoli yesondo yenye yezona zinto zishushu
Emva kophando oluninzi kunye nokucinga, ndaye ndagqiba kwelokuba ndithenge enye, kodwa yayixabisa idenariyo, kwaye ukufika kwayo, yenye yezona zinto zishushu kakhulu. Xa abantu becinga ngonodoli wokwenyani, abantu abaninzi bacinga ngonodoli ongenayo, ngamanye amaxesha obizwa ngokuba "ngumolokazana womatiloshe". Ngaba oku kwenzeka kuwe? Ukhe wakuthathela ingqalelo ukuzama unodoli wesondo onqabileyo?
Isini sonodoli sikhawuleze kwaye siphucule okungcono kunye noPhuculo
Ngoku sikwixesha elinika umdla, kwaye inkqubela phambili kunye nokuphuculwa kwezakhono zetekhnoloji zithetha ukuba kraca kwaye kubhetele izinto ezintsha kunye nokuphuculwa kunanini na ngaphambili. Usaziwayo o-super sexy kwi-Intanethi, enomzimba omangalisayo, uneqela elikhulu labalandeli abancinci, kwaye unetalente kakhulu. Akukaze kubekho kwimarike enedoli yokwenene yesini. Abathengi abaninzi bayakha ...
Ukude kude ngenxa yoSondo loDoli oNgcono okanye ezinye izizathu
Ewe kunjalo, oku akwenzeki ngoonodoli besini (okwaziwa ngokuba yi "love dolls"). Eli liqabane lakho onokuhlala unalo! Siyakuthanda oko sikubonayo kwiimuvi ezingamanyala, kodwa iintombi kunye nababaleki banokuba madolw 'anzima ukuya kufikelela ezingqondweni zethu ezimdaka. Kodwa iqabane lakho likude ngenxa yobungcali okanye ezinye izizathu, kwaye ngoku uhlala wedwa. Y ...
LoDoli uya kutshintsha uMzi mveliso weToyi yoSondo ngonaphakade
Kule minyaka idlulileyo, oonodoli bezesondo bafika indlela ende kuyilo kunye nobunzima. Unodoli omtsha weWM uyathandeka, ubungakanani bayo buyamangalisa, kwaye yonke into iphantsi kolawulo lwakho. Ihlabathi loonodoli besini alisayi kuphinda lifane kwakhona. Hayi, konke kubulelwe kunodoli kuphela. Lo nodoli uza kutshintsha ishishini lokudlala ngesondo ngonaphakade. Ngaba ucinga ngokuthenga ...
Iidoli zesondo ziyafuna
Unodoli weSini ongathandekiyo ulangazelela utshintsho oluthile kubomi bemihla ngemihla
Abasetyhini zizidalwa ezintle, kodwa ngamanye amaxesha badandathekile. Kungenzeka ukuba uhlala ungalazi iqabane lakho, elinokukhokelela ekuphulukeni nokuthetha kwaye ekugqibeleni ubudlelwane. Kungakhathaliseki ukuba yintoni ubomi bakho bobulili, wonke umntu unokufumana ubuninzi okanye ubulili obungcono. Ungumfazi owomeleleyo, kodwa ngaba ujonge ukuthambeka kwegxalaba kwiintsuku ezimbalwa? Okanye u ...
Isini sonodoli sinokuzifumana ngaphandle kwesivumelwano
Kulula ukuyigcina kunodoli opheleleyo wesini, kwaye ingaphezulu kwesiqingatha sexabiso, ukuze ube nokuxoxa ngaphandle kokulalanisa. Iidoli zesini luhlobo lwezinto zokudlala ezinokukhulisa kunye nokugcina isondo. Ziyaziwa phakathi kwabantu abangatshatanga kunye nabantu abaneminyaka engamashumi amane. Kubantu abaninzi, umbono wokuba nodoli wesini ubonakala ungaqhelekanga. Emva kwayo yonke loo nto, yinto yabucala. Ngaba ...
Idoli yesondo ikunika ulonwabo olungapheliyo ngalo naliphi na ixesha
Lo nodoli wesini unexabiso elimangalisayo kwaye ugqibelele kwabo banendawo yokugcina encinci kunye nohlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo. Vala amehlo akho kwaye ngokuqinisekileyo uya kucinga ukuba ulala nomntu obhinqileyo wokwenyani. Umahluko kukuba oonodoli abakaze bathi hayi. Unodoli wothando lokwenene ngokweemvakalelo uyonwabisa. Iidoli zesini ziyinyani kwaye kulula ukuyisebenzisa, isondo ...
Dlala Nayo Nawuphi na amanye amaXesha eSondo oSondo
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, ubudlelwane nonodoli bezesini kuya kuqinisekisa ukuba uqala usuku lwakho kwimeko engcono kwaye wenze okungakumbi kubomi bakho bemihla ngemihla. Ewe, ukuhlala nodoli wothando lwakho kungayiphucula imveliso yakho ngexesha elifutshane. Ungadlala ngezithunywa zevangeli, oonodoli abasebenza ngesondo, okanye nangayo nayiphi na into oyithandayo ngokwesondo kwaye ungonwaba ...
Into eyinyani kunayo
Idoli yesondo isondele kakhulu kwinto eyiyo
Ukudibana kwethu, saziva ukubetha kwentliziyo okukhawulezileyo, ukuphuza, kwaye sangena kwindawo entle yasentwasahlobo, kwaye mna nawe saqala ukugcwala. Rhoqo jonga uluhlu lwemveliso yethu ukuqinisekisa ukuba sinoluhlu lweedoli zamva nje. Uya kufumana ixabiso lokusebenzisa ngakumbi kunodoli, oluya kuba lolona tyalo mali luthe walwenza. Akukho nto isondeleyo ...
Ukuba iingubo kwiDoll yeSondo zinokuKonwabisa
Ukuza kuthi ga ngoku, zimbini iintlobo zoonodoli ababelana ngesondo, kubandakanya oonodoli abangenayo, abakhoyo kwaye bahlala benemingxunya emithathu. Kweminye, ziyinyani kangangokuba azinakufunyanwa ngumzimba womfazi wokwenene. Cinga ngesondo elinomdla. Ukwabelana ngesondo neqabane lakho olithandayo kwaye ulixabise. Ukuphuhliswa kwetekhnoloji kule minyaka idlulileyo ibiyinyani ...
Iidoli zesondo ziyaCocwa njengoko ungena emlonyeni
Kubandakanywa imiphetho yeembambo kwilungu lobufazi kunye ne-anus, enokuhlala inceda abo baphulukene namaqabane abo abalulekileyo, njengabafazi abafileyo. Ziyinyani kangangokuba zinokuba ngoomama ngokwesivumelwano kubantu abaninzi emhlabeni. Ayisiyiyo kuphela ngenxa yokuba oonopopi abaphezulu banomtsalane ocacileyo ngokwasemzimbeni, kodwa nangenxa yonxibelelwano lweemvakalelo endithetha ngalo ...
Ubomi boBucala boBucala
Isini sonodoli siya kuba noBomi boBomi oBalaseleyo boBomi
Aba nodoli bokuqala bezesondo bakwimidwangu. Kule minyaka ilishumi idlulileyo, iqale ukuba yinto yobugcisa ngandlela thile. Kwaye, ewe, xa usenza iidoli zesini, uya kuba nobona bomi bobulili bulungileyo ebomini bakho. Ndiyayithanda i-torso yale doli yesondo enezinto ezininzi ezinokwenziwa ngokwezifiso ukuze ukhululeke uzenzele ngokwakho. Ithambile kwaye inyani kakhulu kangangokuba ivakala ngathi ...
Oonodoli bezesini ababhinqileyo ukuhlangabezana nezenzo zabo zesondo
Ukuthenga unodoli olungileyo wesini kuya kwenza imimangaliso yolonwabo lwakho. Uya kuluxabisa unodoli ngendlela abantu abaninzi abangacingi ngayo. Uya kwenza ubudlelwane bokwenyani kwaye wakhe ubudlelwane obuyinyani phakathi kwakho naye. Yonwabela ibanga lesilicon lezinto ezigqwesileyo, ezizizo kunye nezixhobo zokuthintela ukungcola, oko kuthetha ukuba umlenze neenyawo d ...
Ezi Dolls zesini zinokuxelisa amaNtombi amaninzi
Benza umqolo ungcangcazele xa uziva ukunyaniseka kwawo. Isikhumba seSilicone sinombala ofanayo kunye nokuthungwa kwesikhumba sendalo, kwaye sinokuphinda sivelise iinkcukacha ezilungileyo zala maxesha (umbala wemithambo, i-areola kunye neengono, umbala wemilebe yelungu lobufazi, i-anus). Kwabanye abantu, aba nodoli bezesondo banokulingisa uninzi lwamantombazana athandana nawo, ke abanakuphinda bafune amantombazana ayinyani ...
Ukwabelana ngesondo ngoBomi noBomi kunye noKhetho lokuFa ngqo
Inokubazisela ubuhlobo obuncinci, ibancede babe yi-nihilistic, kwaye xa bexakekile, banokubenza babonakale njengomhlobo onokubakho. Kuya kufuneka ufunde unodoli ngononophelo njengoko ukhetha ugqirha wentliziyo. Ukuthenga unodoli wesini akunakuba yindlela ethe ngqo yokukhetha ubomi kunye nokufa, kodwa kuya kufuneka kufundwe ngononophelo. Ibizwa ngokuba bubunewunewu ...
Epheleleyo ngokuthandana ngesondo Tpe sex Doll kuyanceda
Yibambe pussy yakhe eqinileyo, impundu kunye nomlomo kwaye umbonise kanye le nto ilahlekileyo. Yenziwe ngokwezifiso, kulula ukuyisebenzisa, kwaye ibekwe ngokufanelekileyo, kwaye iyinyani kangangokuba kunzima ukulibala ukuba ngamanye amaxesha unodoli wesini. Oonodoli abicah bayilelwe ukuvelisa kwakhona iimvakalelo kunye neemvakalelo zabafazi bokwenyani. Ke ngoko, kubunjwe kwinto efana kakhulu ...
Enye indlela efanelekileyo
Ngokubhekisele kwiDoll yeSondo ngokuqinisekileyo yinto eFanelekileyo
Kumadoda amaninzi, banqwenela inyani, kodwa abafuni kujongana noxinzelelo lwabasetyhini kunye noluntu. Amanye amadoda awafuni ukuba kunye nabantu, kwaye aba bathandi boonopopi bahlala bengaziwa kangangokuba banokuba yindawo efanelekileyo. Ukuba awuzange uthenge unodoli wesini ngaphambili, ndingakuxelela into ibenye-ngaphandle kokuba ufunda ngesondo ...
Zonke iiFantasy zakho
Sebenzisa iDoll yeSini ukufezekisa zonke iiFantasy zakho
Uya kubanjwa kwisilingo sakhe esinomtsalane. Iidoli ze-silicone azikhe zenqabe, ungayisebenzisa ukufezekisa yonke iminqweno yakho. Oku kuhlala kunzima kumadoda athile ekufuneka eyisebenzisile, kwaye kuhlala kungunobangela wokuba amadoda angafuni ukuya kubafazi. Ukuhamba ngempazamo enye emntwini (eneneni amaxesha amaninzi) kunye nokufunda kwiimpazamo, ezi ...
Isondo Unodoli Omangalisayo Umzimba Phambi Kwakho
Abafazi bokwenyani banokwabelana ngesondo. Abafazi bokwenyani bahlala benemithwalo emininzi, enje ngeemeko zangaphambili, izehlo kunye neengxaki ezininzi. Ayisiyiyo kuphela into yokuba imali oyisebenzele nzima ichithelwa kunodoli ongayithandiyo, kodwa okona kubaluleke kakhulu, unxunguphele ngokungakwazi ukufumana unxibelelwano kunye nentsebenziswano ethetha ngayo bonke oonodoli abaphumeleleyo. Kanye ...
Indlela yoonodoli bezesondo
Indlela yoonodoli bezesondo kunye namaqabane aBalinganisa amaThathu
Ukuba utsiba inkqubo yophando kwaye ukhethe unodoli ngokungakhethiyo, akukho mntu unokuqinisekisa ngokonwaba kwakho. Ngapha koko, unokudandatheka ngakumbi kunangaphambili. I-torso kulula ukuyigcina, ukuyicoca kunye nokuyisebenzisa. Ilungele ukusetyenziswa yodwa okanye neqabane, nantsi indlela endilinganisa ngayo kathathu ngonodoli wesini kunye neqabane. Ke ngoko, unodoli unokusebenza njengoko kufuneka. Nge ...
Hambisa kwiDoll yeSondo ngaphandle kokujongana neNkampani
Kukhulu ngokwenene. Unodoli wesini uyinyani kangangokuba ukuwutyhalela ngaphakathi nangaphandle kuyonwabisa, kwaye ukubethwa ngempama "kolusu" kubushushu obukhawulezileyo bumangalisa. Ngokubonakalayo, oonodoli abicah bafana kakhulu nabafazi bokwenyani. Ngokubhekisele kwithambo, lenziwe ngentsimbi ethambileyo kodwa enganyangekiyo ngokubola kwaye idityaniswe kunodoli ngokubumba kwe-silicone. Eyomntu ...
Inqanaba loTyalo-mali olunoDoli weSondo kwaye uzimisele ukuLisebenzisa
Kuxhomekeka kwinqanaba lotyalo-mali onalo kwaye uzimisele ukuchitha. Ayiselulohlobo olufanayo lwedoli ye-vinyl e-inflatable, igqibelele kwaye inobunzima malunga ne-30 kg. Ngonodoli wesini, ungamshiya lo mfazi ngaphandle kwazo naziphi na ezinye iingxaki. Kwamanye amadoda, ukumelana nokudla ngokuba neentloni kuba nabo bekwimeko efanayo okanye abanakho ukumelana ...
Idoli yesondo ibisokola ukufumana uMfazi ogqibeleleyo
Mhlawumbi ixesha elide, bezama ukufumana umfazi ogqibeleleyo, kodwa abanako, kuba ayisiyiyo le nto banokuyifumana. Ngamanye amaxesha kunzima ukufumana indlela yokuphuma, kodwa amadoda amaninzi ahlala esebenzisa oonodoli abicah. Unodoli wesini, okwaziwa ngokuba ngunodoli wothando, yinto yokudlala ngesondo efana nomntu wokwenene osetyenziselwa ukuphulula amaphambili. Ukuba unohlahlo-lwabiwo mali olusisiseko, ...
Unodoli wesini ujongeka njengomntu wokwenene
Bayifunda ngokuzama nangempazamo, kodwa ngamanye amaxesha kubuhlungu kakhulu. Ukuza kuthi ga ngoku, ndithenge phantse oonodoli abalishumi elinambini, kwaye ngokuthenga ngakunye, ndiziva ndizithembile. Xa uthenga unodoli ngoku, ngekhe ndizive ndingena ngaphakathi kwaye ndithandabuza. Kukho iindlela ezininzi, kodwa konke kuxhomekeke kwiimfuno zakho kunye nemali onokuyisebenzisa. Unodoli weSilicone ngunodoli onyanisekileyo, ...
Iidoli zesini zinokonwaba kakhulu emzimbeni
Ukuba imilenze kunye neenyawo zakho zivula umzimba wakho, jonga into ehlangabezana neemfuno zakho, kwaye ukuba liyi-esile kunye nelungu lobufazi olifunayo, ungathanda unodoli wesini. Iya kubonelela ngeenkonzo amaxesha amaninzi njengoko ufuna kwaye iya kukuzisela ulonwabo. Ukongeza, unokuyinxiba ngeempahla kunye neempahla zangaphantsi. Amadoda nawo ahlala ekholelwa ukuba abafazi bokwenene ...
Thenga isondo kunkampani ehloniphekileyo
Injongo yayikukuhlangabezana neemfuno zesini zomkhosi waseJamani ngexesha lokuhlasela kwamaNazi eYurophu. Ukulangazelela unodoli wesini, ndiza kuthenga kuphela kwiinkampani ezaziwayo, kuba amaxesha amaninzi, oonodoli besini abancinci abavela kwiinkampani ezingaziwayo kunokuba yingozi kwaye ibe yityhefu. Zonke iithoyi zam zesini zikhuselekile nge-100%. Kuya kufuneka ujonge ezi mvavanyo ukuze ubone ukuba ziyinyani kwaye azikho commerci ...
Ngaba i-Sex Doll inganceda amaNinzi aMadoda anamaTurvulence akha ubuDlelwane
Kudala ngaphambi kokuba zithengiswe, oonodoli abicah bavavanywa ukubona ukuba bayayifumana na imigangatho eyimfuneko (ukubamba, ukuziva, njl. Awudingi ukuhamba nayo uyokutya, kwaye awunakujongana nabazala bakhe okanye abahlobo abasenyongweni abamthiyileyo isibindi, kuba ayivakali. Ngayiphi na imeko, inokunceda amadoda amaninzi afumana isiphithiphithi ukwakha ubudlelwane ...
Vavanya idoli yesondo ukuze uqiniseke ukuba uyazithenga
Phatha ukhetho lwakho lokuthenga unodoli ngendlela efanayo xa uthenga imoto-thatha ixesha lokukhetha, uvavanye izibonelelo kunye neziphene zedoli nganye-kwaye ubeke iodolo! Uninzi loonodoli besini beza nekhithi yokulungisa simahla, nangona kunjalo, qiniseka ukuba uhlala usebenzisa ioyile yokuthambisa, ucoce unodoli wesini, ugcine unodoli wesini ngokufanelekileyo, kwaye uqiniseke ukuba ugcinwe ngaphandle ...
Ekunene Dex Foll
Ukukhetha iLungelo lokuLandela iDex akusoloko kulula
Njengoko igama "oonodoli besini" libonisa, bayilwa ikakhulu ukwanelisa umnqweno wesini womniniyo. Ukunyamekela into yokudlala ngesondo kubalulekile ukuqinisekisa ukuba ihlala iminyaka emininzi ngaphandle kokuvelisa iinyembezi. Ungamvumela aguqe ngamadolo, afukuze, okanye agobe amadolo, kuxhomekeke kuwe. Ngayiphi na imeko, kuhlala kunzima endodeni, kwaye ukuba ...
Umgangatho ophezulu woDoli weSini kwaye phantse ukuGqibezela ukugqiba
Iidoli ze-silicone zinokubamba izikhundla ezahlukeneyo ukuqinisekisa ukuba unokonwaba ngeendlela ezahlukeneyo. Baye benza inkqubela phambili enkulu ukusukela ekudalweni kwabo. Namhlanje, uninzi loonodoli baneentlobo ezimbini zolusu, enye yazo iyinyani kwaye inokusasazeka emzimbeni wonke. Endaweni yoko, oonodoli bezesondo benziwa ngoomatiloshe abangamaDatshi ababodwa kwaye benesifo ngenkulungwane ye-17. Emveni kwakho konke, ...
Kwaye unodoli wesini ujongeka njengomfazi wenene
Ewe unokulala kufutshane, kodwa ngamanye amaxesha umntu ufuna ukukhulula ngokukhawuleza. Kwiidoli zothando, uhlala usisisombululo esifanelekileyo kuba ziyinyani kwaye zikhangeleka njengabafazi bokwenyani. Le yinto ethethwa ngabanye abantu. Nangona kunjalo, inyani kukuba ngokungafaniyo nabantu abaninzi, uHitler usenokuba akazange aqambe oonodoli besini. Nangona kunjalo, ukuba ufuna unodoli onokuthi ...
Ke i-TPE yeDoll yoSondo ingayisombulula ingxaki
Thanda oonodoli, kodwa ungatsho ukuba abekho phesheya, abanakho ukujamelana nokuthandana, kwaye abanakuba kunye namaqabane abo. Ukuphelisa oku, uHitler wanika oonodoli besini kumkhosi wamaNazi, esusa nasiphi na isidingo sokuba amajoni aphonononge ubufazi bamanye amazwe. Xa ubuzwa ukuba uthenge unodoli we-TPE okanye unodoli we-silicone, ukhetho luya kusekelwa kwiimfuno zet ...
Ifuna i-Doll yoSondo eyedwa ixesha kunye namandla
Ubudlelwane phakathi kwabantu bunokufuna ixesha namandla ongenawo. Kwamanye amadoda, kunokubonakala kungaqhelekanga ukukhetha unodoli wokwenene wesini wasetyhini. Ukuba amajoni aqala ukukhulelwa abasetyhini baseYurophu, abantwana babo ngokuqinisekileyo baya kudityaniswa. Indawo yethu yokujonga iqala ukusuka kwindawo yokujonga ebonakalayo, ukusebenza, kunye nokudlula koonodoli abaye ...
Ubomi besini obungalibalekiyo
Idoli yesondo ithembisa ukuba nobomi besondo obungalibalekiyo
Izinto ezintandathu onokuzenza ukuhambisa eLos Angeles okanye naphina apho ziyonwabisa. Ubuso bakhe obuhle babukrolwe ngumkroli onamava. Aba nodoli baya kukuzisela amava angazange abonwe. Awunakuze ubone i-redhead kwi-lingerie, kodwa oonodoli abicah baya kukwenza ufune. Ngapha koko, iza noluhlu lomxholo onomdla kakhulu. Isondo unodoli p ...
Unodoli wakho weSondo
Unokwenza ngakumbi ngeDoll yakho yoSondo
Kwilizwe elinesithembu, abantu abakhetha isithembu endaweni yesondlo bayadandathekisa amadoda. Oonopopi bezesondo zezinye zezinto zamadoda zale mihla "zokufuna ulonwabo". Ngokunyuka kweemfuno zentengiso, umgangatho woonopopi bezesondo uphuculwe kakhulu. Ngokwemilo kunye nokuthinta, obu bubomi bokwenyani kwaye abantu abaninzi bayothuka. Afte ...
Iidola zesini ziThathwa njengeyona nyani iyinyani
Kwimizi-mveliso yase China, oonodoli benziwa ngokweminqweno yabathengi. Ngoku unethuba lokuyila unodoli wakho wesini. Le doll eyiyo yahlukile kwezinye iidoli ngexabiso kunye nomgangatho. Namhlanje, kolu luntu, kuya kufuneka uchithe imali eninzi ukukhathalela iqabane lakho ngexesha nasemva kobudlelwane. Umntwana wakho, nkqu nesilwanyana sakho sasekhaya, uya ...
Iidola zesondo zenza iiModeli eziSebenzayo zibeNokwenzeka
I-Redheads inegama elihle, kwaye "ukuqhubeka" akunjalo. I wonder uyazi ngoku? Ukulwa iphonografi, amaqonga amaninzi ekuhlaleni kunye neendawo zokuthenga ziyakwalela ukubukela iphonografi, kodwa oonodoli bezesondo abanyanzelekanga ukuba babonise iphonografi! Wakhe wacwangcisa ukuba nonodoli wesini? Ukuba kunjalo, akuwedwa. Ngokweengxelo, oonodoli bezesondo baye baba ...
Isini sonodoli sinayo yonke into oyifunayo Ukonwabisa
Uninzi lwabantu alukuthathi nzulu ukuzonwabisa, kodwa kufanele. Siphila kumaxesha oxinzelelo. Ukuthatha ixesha lokuphumla kubalulekile, kwaye ukuqesha iqabane yindlela ekhawulezayo nelula yokuqinisekisa ukuba umntu ukhululekile kwaye uyonwabisa. I-TPE luhlobo olutsha lwesilicone olunokwolulwa luye kumaxesha angama-5.5 ubude kwaye luthambe kakhulu! Ukuvavanywa ukuba kukhuselekile ebantwini. I ...
Idoli yesondo iyakwazi ukuma kwaye inamagxa asuswayo
Ukuba awukhangeli ngokusondeleyo, uya kucinga ukuba ngumntu wokwenyani. Kungenxa yoko le nto, nkqu nentombi okanye umfazi, uninzi lwamadoda luyajika lujonge abafazi abanomtsalane. Yiyo loo nto amehlo akho ejonge kwiimodeli zabasetyhini kwizinxibo ezi-sexy. Unokukhetha umbala wamehlo akho, i-manicure yakho, nokuba ngaba imodeli iya kuba nakho ukuma kwaye ube "negxalaba elihambayo", ...
Isikhumba soDoli wesini sinokuLungiswa kwakhona ngeTekhnoloji ePhambili kakhulu
Amalungu abantu enziwe ngentsimbi eyenziweyo esebenzisa itekhnoloji yakutshanje yobuchwephesha yokuqinisekisa ukuba imilenze ingazolula ngokukhululekileyo ukuze yenze iindlela ezahlukeneyo zokuma. Ngokubonakalayo, unodoli ugqibelele, isifuba somelele kwaye sithambile kakhulu. Ngokubhekisele esinqeni, zijikeleze ngokukodwa, zomelele kwaye zithambile. Njengonodoli besini sangoku, inkangeleko ayisiyi kuphela kufutshane ...
Unodoli wesini Fumana umntu ohlala naye
Kuyavela ukuba aba nodoli benziwe nge-resin ye-silicone ayisiyontle kuphela kwaye inomtsalane, kodwa ikwafana kakhulu nomtsalane kunye nobushushu kubantu bokwenyani. Ekuboneni kokuqala, awunakuyibona njengesidenge. Pheleka uhambo olumnandi olungacwangciswanga. Ngaba ukhe wafika kwisixeko esitsha ukuze uphonononge kwaye ungazi ukuba wenzeni? Ukuhanjiswa zezona zikhokelo zibalaseleyo! Ngokukhetha ...
Isini seDoll ngesondo ngokuqinisekileyo Lukhetho lwakho olululo
Ukuba awufuni kukhathazeka ngothando kunye nazo zonke iindleko, iithoyi zesini ngokuqinisekileyo lukhetho lwakho olufanelekileyo. Ekuphela kwendlela yokuxhasa oonodoli besini yindawo yokugcina enokucocwa kwaye isetyenziswe rhoqo. Ukubona unodoli, saqonda kwangoko ukuba sijongana neemveliso eziphezulu. Ewe kunjalo, akukho siphako ebusweni, kancinci i-Asiya, oqhelekileyo, mhle a ...
Ingono uqobo lwayo
Isondo Unodoli Unokukhetha Umbala Wengono ngokwawo
Iidoli zesini zifana neekhondom esihlala sizifumana. Zizinto zabantu abadala. Ezinye iimfuno ziqhelekile kwaye azinakucaciswa ngomxholo wamanyala. Olu phuhliso lunokubangelwa zizinto ezininzi, olona luchanekileyo kukulinganisa kwengqondo. Iingqondo zamadoda okanye ezabafazi zixhunyiwe ukuze zixabise iifom zabantu. Xa ukhetha isondo d ...
I-TPE yeDoll yeSollter ethambileyo
Ulusu olugudileyo olubukeka lubushelelezi kwaye lunokubamba izandla. Akumangalisi ukuba olu luhlu loonodoli besini ekwabizwa ngokuba yi "silicone fairies". Ubumnene bobumnene buhle ngokwenene njengentsomi. Emva kwayo yonke loo nto, izikhokelo zabakhenkethi azinakho ukubonelela phantse ngononophelo lomntu omnye, okanye zibonelele nangayiphi na ingqalelo. Uya kuba liqela kwaye undwendwele kuphela imigibe yabakhenkethi eyaziwayo. Yiyo le wa ...
Iidola zesini ziba liphupha lomfazi
Oku kukunika ithuba elikhethekileyo lokukhulelwa umfazi ophuphayo ofuna ukuba abe nguye. Sebenzisa iithoyi zesini ngaphandle kokukhathazeka malunga nokukhulelwa. Izibini ezininzi zicinga ukuba zinokuthintela inzala xa zisabelana ngesondo, kwaye ekugqibeleni intombi yabo iyakhulelwa. Ikhondom yaphuka okanye umfazi wayezimisele ukukhulelwa. Ngokwendlela yokuphatha, unodoli u f ...
Ufuna ukhathalelo olungakumbi
IiWigi eziQhelekileyo eziza neeDolls zoSondo simahla zifuna ukhathalelo olungakumbi
Inja yokuma yeyona ndinokuyincoma, kwaye ungayisebenzisa ngokulula ukuze uve amabele. Kubantu abaninzi abafuna ukuthenga okokuqala, bobabini banomdla kwaye bayoyika kuba abazi ukuba bamsebenzise njani okanye bamthengele. Kukwanjalo nakwabasetyhini abafumana iimilo zobudoda kodwa abakwazi ukunceda kodwa bababaze imifanekiso eqingqiweyo yemisipha. Ifuna ukhathalelo olungaphezulu ...
Iimvakalelo zoonodoli bezesondo njengamabele akhe makhulu
Ukuhamba nawe kuhambo olungacwangciswanga yeyona ndlela yokufumana amava akho ngokupheleleyo! Iidoli ze-silicone zihlala ziziva ziqinile, ngelixa i-TPE irabha ethambileyo ithambe kakhulu. Ewe, oonodoli abicah nabo banokuthamba kakhulu, kodwa iindleko ziya kunyuka kakhulu; Amandla okuthwala uya kukushiya ungashukumi. Kunye naye, ...
Idoli yesondo yeyona Ndlela ikhawulezayo
Isifuba sakhe esivulekile nesimo sakhe sisinika umbono wento esinokuyenza, Oko kukuthi, yonke into ethi qatha engqondweni. Into emangalisa kakhulu kukuba aba nodoli bayilwe kakuhle kwaye abananto yakuthetha. Emva kokunxiba iimpahla ezintle, zifana nealbham yefoto emnandi! Bayazazi ezona klabhu zibalaseleyo, amalwandle acocekileyo, awaziwa kangako ...
UMdali woDoli weSini angazichaza iZiQiniso zoMntu oLungileyo
Kuba unodoli owenziwe ngesandla, phantse awunazimpazamo. Kuthathe iiyure ukuyenza. Ukongeza, inobunzima obungama-20 kg kuphela, kwaye amathambo ayo esinyithi abhetyebhetye kwaye alula kakhulu. Ungayishiya phantsi kwebhedi, kwigunjana okanye kwigumbi elingaphantsi, ukuba ucinga ukuba akukho mntu uza kuflip. Indawo yakho yezinto. Le mifanekiso iqingqiweyo yenza ukuba abadali bayo babonakalise ...
UkuSebenza koDoli weSondo okungcono kuneTPE yeDoll yeDoll yeDoll yeplastiki
Uyakuthanda ukutya ngaphandle? Ukuba uthanda ukutya okungaqhelekanga kwaye ungathanda ukuzama izitya ezintsha, kunokuba mnandi ukuzama indawo yokutyela entsha kunye ne-escort. Oonodoli abicah baqhuba bhetele kune-TPE sex dolls. Kuba imathiriyeli iqine kancinci, ukusebenza kuya kuba ngcono. Eminye imizobo yesandla esetyenzisiweyo kunye neenkcukacha zinokumelwa kuphela yisilicone ...
Ukonwaba ngesondo ngesondo kuya kukuzisela ulonwabo ngakumbi
Hlamba usana lwakho kwangoko emva kokwabelana ngesondo. Oku kuhlala kufuna ukuba amadlozi asuswe kwi-orifice. Xa kuthelekiswa nokusebenzisa oonodoli abanokuthelekiswa okanye oonodoli abancinci abaphantsi, ukuba neentlobano zesini nolo doli mhle kuya kukuzisela ulonwabo. Ewe yonke into icwangciswe ngononophelo ukuze wonwabe. Nangona ndiyazi ngokusuka entliziyweni ukuba kuphela ngesondo d ...
Uhlobo lweSondo Robot
Iidola zesini zizise inguqulelo yazo yeRobhothi
Imizekelo yezenzo zobugcisa zibandakanya umfanekiso oqingqiweyo kaDavid owenziwe nguMichelangelo ngo-1504 kunye nomfanekiso oqingqiweyo wekhoboka lamaGrike elenziwa nguHiram Bowers ngo-1843. Kweza neenguqulelo zabo zesini, kodwa kuza nobushushu bomzimba, inkqubo yesandi kunye nobukrelekrele bokuzenzela. , Oko kuthetha ukuba ungancokola nemodeli. Oonodoli bezesondo abanaso esohlobo ...
Idoli yesondo inokuyifihla ekhaya
Iphinde yaziva ingakholeki, andazi nokuba kungenxa yamabele akhe amakhulu okanye isikhundla sakhe. Ngayiphi na imeko, unelungu lobufazi elincomekayo, umva kunye nomlomo wenyama, kwaye awuzukruquka. Wonke umntu unesihlandlo sokuqala. Ukuba unexhala lokuba umntu uza kuyifumana imfihlo yakho encinci, ungayifihla ekhaya. Kangangeenkulungwane, abantu bebesenza kwaye bengabanini ...
Inzala yoSondo eya kuthi yonyuke njengoko uPhuculo luphucula
Oonopopi bezesondo bayakuvumela ukuba ucoce ukhetho lwakho ukuze wandise ukuxabisa kwakho uhlobo lomntu. Abathandi bokwenyani bebesisihloko soqwalaselo lwexesha elide kwimithombo yeendaba kwihlabathi liphela. Kwiminyaka yakutshanje, abantu banike ingqalelo ekhethekileyo kwintengiso yoonodoli besini kunye nabathandi bokwenyani, kwaye sinokubona ukwanda komdla kwiminyaka yakutshanje ukuphucula ...
Iidola zesini Zicoce kwaye uzifake ebhokisini
Ingasetyenziselwa ngokulula isondo ngomlomo, ngesondo ezimpundu kunye nesondo eliqhelekileyo. Le modeli iqinisekile ukukholisa iintloko ezibomvu. Oonodoli besini nabo bagcinwe kakuhle. Kufuneka nje uzicoce emva kokuzisebenzisa kwaye uzifake ebhokisini. Olu luvo lusebenza kubunini boonodoli besini. Wena, umnini, unokukhetha imodeli yedoli yesini ebonisa iimpawu zakho ezifanelekileyo.
Ilungele isidlo sangokuhlwa
Inkampani yeDoll yeSondo ilungile kwisidlo sangokuhlwa
Ukuba uhambela ishishini, okanye ufumanisa nje ukuba akukho namnye kubahlobo bakho okona kulinga, ubuqabane ngumhla wesidlo esifanelekileyo. Iidoli ze-Silicone zinokolulwa kathathu kuye ezintlanu ngokweefomula ezahlukeneyo, ngelixa i-TPE oonodoli abathambileyo banokuphakanyiswa amaxesha amathandathu ukuya kwesibhozo. Ke ngoko, i-TPE irabha ethambileyo inamandla angcono okuqina kunye nokunye okungaphezulu ...
Iidoli zesondo azibonakali ngathi ziQinisekisa imeko yabaseTyhini kwixa elizayo
Amabele akhe agobe kakuhle kwaye omelele kakhulu, kwaye iinkcukacha zangasese nezangasese ziphinde zenziwe ngokugqibeleleyo. Udonga lwangaphakathi lwamva luguquguqukayo kwaye luthambile, olwenza ukuba lusebenze kuzo zonke ii-orifices ezikhoyo kulo. Ngaba kufanelekile? Gosh, aba nodoli babuthathaka ayizizo nje "izinto zokudlala". Zintle njengamantombazana e-anime ...
Isini Unodoli unokuziphepha ezi ngxaki
Ngale ndlela, le misebenzi yobugcisa ibalaseleyo inokwenza ukuba abantu babonakalise ngcono kubo. Akukho mntu unokuphendula. Umbuzo wakho. Iphethe ubushushu bokwenyani bomzimba, akukho mfuneko yokuba ithi inamalungu omzimba ahambayo. Ukuhanjiswa ngokwesondo kukhuselekile ngokupheleleyo. Iintsholongwane ezininzi ziveliswa ngokwabelana ngesondo, kwaye zihlala kusithiwa zigqithiselwa kwintsholongwane ukuya kwenye i-throug ...
Iindawo zakho eziya kuyo
Idoli yesondo yeyona ndlela ilungileyo yokufumana onke amaNxweme akho
Kwilizwe lesithembu, abantu abakhetha isithembu kunesondlo bayabakhathaza kakhulu abantu besilisa. Bayazazi ezona klabhu zibalaseleyo, amalwandle acocekileyo, iinkosi ezaziwayo zokupheka, kunye neendlela ezikhawulezayo. Ukuhamba nawe kuhambo olungacwangciswanga yeyona ndlela yokufumana amava akho ngokupheleleyo! Umahluko kwixabiso: Ixabiso lemveliso eluhlaza ...
Oonodoli besini benye yezoDoli eziMnandi kwiNtengiso
Ukusukela ngosuku lokuqala lokuthenga, iithoyi zesondo ziyishenxisile le meko. Akuyomfuneko ukuba ungathandabuzi kwaye ukhathazeke. Ngaba ayisosona sizathu sokuthenga iithoyi zesini? Ukuba ungumntu onomdla woonodoli besini, le dololi yenye yezona zidoli zibalaseleyo kwintengiso. Kodwa kwabo baziva bebiza kakhulu, kukwakhona unodoli womzimba. Umntwana wakho, nokuba sisilwanyana sasekhaya, ...
Iidoli zesondo zihlangabezana neemfuno zokuSondelelana ngokwasemzimbeni
Oonopopi bezesondo babonelela ngoncedo olubalulekileyo ukuba ubungazange ube neqabane lakho, intombi yakho okanye isoka lakho ixesha elide. Imisebenzi inokukunyanzela ukuba ufudukele kwidolophu entsha, ilizwe okanye ilizwe. I-imeyile, umnxeba kunye nabanikezeli beenkonzo zokuthumela imiyalezo banokuhlangabezana neemfuno zonxibelelwano zonxibelelwano zakho kunye nabantu obathandayo, kwaye isidingo sokuhlangabezana nokusondelelana ngokwasemzimbeni sihlala siba nzima ...
Ubunzima beDoll yesondo buxhomekeke kubungcali bobuchwephesha kunye nenqanaba lesiphelo somenzi
Ungaya nakwindawo yokutyela ekubonelela nge-gourmet cuisine ongayiqhelanga kwaye uyise kwinqanaba elilandelayo. Kungonwaba ukufumanisa, ngakumbi xa unamaqabane amahle akufutshane nawe. Iidoli ze-Silicone ezinobungakanani obulinganayo ziya kuba nobunzima obungaphezulu koonodoli be-TPE, kuxhomekeka kubuchwephesha bomenzi kunye nakwinqanaba lokugoba. Kodwa ukuba ufuna nje ...
Idoli yesondo ilungile emadodeni
Ezinye iikhondom zelatex yindlela elungileyo yokuphepha izifo ezosulela ngokwabelana ngesondo, kodwa aziziphelisi ngokupheleleyo iimeko zosulelo. Uya kuba nonodoli omhle, olungele ukukukholisa ngomtsalane wawo. Ke ngoko, aba nodoli bezesondo bafanelekile kumadoda afuna ngenkani. Iidoli zesondo azifuni kulondolozwa. Namhlanje, kolu luntu, kufuneka uchithe imali ...
Idoli yesondo ngokuqinisekileyo liQabane lakho lokunyaniseka
Kwelinye icala, ungathenga idoli yesayizi yobomi malunga nesiqingatha sexabiso lonodoli, kwaye oonodoli besini ngokuqinisekileyo ngamaqabane akho anyanisekileyo kuba ngabakho. Ukuba uhambela ishishini, okanye ufumanisa nje ukuba akukho namnye kubahlobo bakho okona ulinga, ubuqabane ngumhla wesidlo esifanelekileyo. Idoli yesilicone yesini inomsindo omkhulu ...
Idoli yesondo nayo iyakuthintela ekukhohliseni umntu otshate naye
Ukupakishwa kwangaphandle koonodoli bezesondo abayi kubonisa ulwazi lwakho. Ukuba uhlala eflethini kwaye ungafuni ukuba abamelwane bakho bazi ukuba uthenge into ephezulu kakhulu, unokukhetha indawo ekuzixelayo, enokuthintela uninzi olunzima. Unodoli wesini ususa intloko yokwanelisa i-libido yakho xa ukude kumaqabane abalulekileyo ...